गलत सुइ लगाएका कारण छोरी जन्मिएपछि दम्पतीले पाए १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ! – Koshidaily
मुख्य पृष्ठअन्तर्वार्तागलत सुइ लगाएका कारण छोरी जन्मिएपछि दम्पतीले पाए १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ !
काठमाडौं। एउटा गलत सुइका कारण छोरी जन्मिएपछि एक दम्पतीले १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पाएका छन् । खासमा ती महिलालाई गर्भनिरोधक सुइ लगाउनुपर्ने थियो । तर, नर्सले लापरवाहीपूर्ण तरिकाले उनलाई कुन सुइ लगाउनुपर्ने भन्नेतर्फ गम्भीरता नदेखाइ उनलाई फ्लुको सुइ लगाइदिएकी थिइन् । गलत सुइ लगाइएपछि ती महिलाले छोरी जन्माइन् । अहिले यो दम्पतीलाई अदालतले १ करोड डलर क्षतिपूर्ति दिलाएको छ ।